रमेश खरेललाई कोरोना सं’क्रमण आइसियूमा राखेर उपचार गरिँदै:: Mero Desh
रमेश खरेललाई कोरोना सं’क्रमण आइसियूमा राखेर उपचार गरिँदै
Published on: १५ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०४:०६
को’रोना सं’क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी बनेपछि करिब दुई सातायता नेपाल पुलिस अस्पतालमा उपचाररत पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। उनलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ । यो समय सबै नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ!
अस्पताल आउनुअघि नै को’रोनाले उहाँको फोक्सोमा असर गरिसकेको थियो । त्यसैले अ’वस्था केही जटिल थियो। तर अहिले क्रमिक सुधार भइरहेको छ’ अस्पताल स्रोतले भन्यो । नेपाल पुलिस अस्पतालमा उपचाररत दुई जना बहालवाला डीएसपीको एक साताको अन्तरमा ज्या’न गइसकेको छ। गत साता राजकुमार केसी र सोम बार समिर खरेलले को’रोना कारण ज्या’न गु’माएका छन्।
नेपाल प्र’हरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरले पनि पूर्व डिआइजी खरेलको अवस्था सुधार भइरहेको बताए । ‘बीचमा निकै क्रिटिकल थियो भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको थियो मिनी भेन्टि लेटरमा राखेर उपचार भएको थियो। तर अहिले अ’वस्था सुधारोन्मुख छ’, एसएसपी कुँवरले भने।
यो पनि:स्वास्थमा सामान्य समस्या देखिए पछिhospital मा भर्ना हुनु भएका महागुरुहाम्रा कोच दिप श्रेष्ठलाई कोविड देखिए पछि वहाँ अहिले यो रोग सङ जुधी रहनु भको छ। सधै हामीलाई आत्मबल दिने संगीतका जिवत धरोहरलाई कोविड सङ जुध्न सामान्य नै हुनेछ भन्ने मा हामीलाई बिश्वास छ।
वहाँ को उपचार मा अहिले सम्म खटिनु भएको चिकित्सक तथा नर्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।साथै अहिले उपचार भैरहेको HAMS होस्पिट्ल का सम्पुर्ण सहयोगि हातहरु लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद! महागुरु कोच दिप लाई स्वास्थ लाभको कामना!